Barlamaanka KMG Soomaaliya oo isugu yeeray Wasiirada dowladda si ay usoo hor fadhiistaan miiska is-xisaabinta. | JILYAALE_ONLINE
Barlamaanka KMG Soomaaliya oo isugu yeeray Wasiirada dowladda si ay usoo hor fadhiistaan miiska is-xisaabinta.
September 29, 2007 by jilyaale
Wararka ka imaanayo magaalada Baydhabo in Mudanayaasha Barlamaanka Soomaaliya ay maanta shir isugu yimaadeen ayaa la sheegay in loogu wada hadlay arrimo dhawr ah oo ay ka mid yihiin:-
a)- Halka ay mareyso la xisaabtanka Xukuumadda KMG.
b)- Khilaafka Madaxda Dowladda iyo arrimo kale.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Mudane Sheekh Aadan Madoobe oo dhamaadkii kulankii saaka la hadlayay Wariyaasha ayaa sheegay in xildhibaanadu ay isku raaceen baaq ay u dirayaan xukuumada Soomaaliya oo ah iney muddo afar cisho gudahood ah ku hor keento xilndhibaanada miisaaniyadeeda sanadkan, isagoo sheegay in baarlamanku uu talaabo adag oo uusan carabka ku dhufan ka qaadi doono golaha wasiirada haddii mudada loo qabtay ay ku horkeeni waayaan miisaaniyado.
Wuxuu kaloo uu ka hadalay in xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee aan weli hor imaan xildhibaanada si loo xisaabiyo ay muddo 4 afar cisho gudahood ah ku yimaadaan baarlamanka, wuxuuna tilmaamay haddii ay iyaguna ku hor imaan waayaan mudada loo qabtay in arintooda loo gudbin doono guddiga anshaxa ee baarlamanka.
Baarlamaanka KMG ah ee Soomaaliya ayaa wuxuu waday in muddo ahba qorshayaal uu kaga dhageysanayo Xubnaha Wasiirada waxqabadkooda, iyadoo Wasaarad kasta waxqabadkeeda soo gudbinaysay.
← Ciidamada Isbahaysiga dib u xureynta Soomaaliya oo ku gacan Sarreeya dagaallada ay isaga soo horjeedaan iyaga iyo Ciidamada Huwanta ah.
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf wuxuu rabaa inuu Xilka ka qaado Ra´isal Wasaare Cali Geedi, balse Cali Geedina muxuu rabaa isna??. →